Warar - Isbedelka Kobaca ee Bamka Biyaha ee Aquarium iyo Bamka Biyaha Solar
Sida shirkadda YUANHUA, waaxdeena R & D ayaa had iyo jeer soo saarta alaabooyin cusub, oo buuxiya shuruudaha macaamiisha kala duwan ee suuqyada gudaha iyo dibaddaba.
Waxaan la yaabanahay, oo uu saameeyay fayraska taajka cusub, warshadaha aquarium farsamada isha iyo baahida suuqa qorraxda waa mid xoogan sanadkaan, iyo wadada, bambooyin biyo aquarium iyo bambooyin biyo qoraxda ayaa sidoo kale ku koray qaabkan.
Matoorada biyaha ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay aafada. Wax soo saarkii dalalkii ugu waaweynaa ee soo saara maarta ee adduunka ayaa hoos u dhacay, laakiin dalabka naxaasta ee Shiinaha ayaa kordhay. Silig Copper waa sheyga ugu muhiimsan ee bambooyin biyo, taas oo keentay in koror ku yimaado qiimaha wax soo saarka ee warshadaha bamka biyaha.
Tamarta yaraanta iyo wasakheynta deegaanka ayaa noqotay arrimaha ugu muhiimsan ee lagu xaliyo horumarka bulshada maanta. Fog
Dhibaatooyinka dhaqashada xoolaha iyo biyaha la cabbo ee degmada ayaa inta badan lagu xadiday xadeynta gobolada - iyada oo la fiirinayo dhibaatooyinka kor ku xusan, matoor biyood fotovoltaic ah ayaa soo baxa sida waqtiyadu u baahan yihiin.
Qoraalkan, mabda'a aasaasiga ah iyo qaab-dhismeedka nidaamka bamka biyaha sawir-qaadista ayaa la soo koobay, iyo horumarka cilmi-baarista iyo xaaladda hadda jirta ee nidaamka bamka biyaha sawir-qaadista ayaa laga wada-hadlay, warqadani waxay ka hadlaysaa oo ay falanqeyneysaa jihada cilmi-baarista soo socota ee matoorka biyaha sawir-qaadista warqaddan waxay falanqeyneysaa suurtagalnimada iyo faa iidooyinka bulshada ee bamka biyaha ee 'photovoltaic pump', rajada arjiga ee nidaamka mashiinka biyaha lagu dhaansado ayaa la rajeynayaa.
Nidaamka bamka biyaha ee qoraxda wuxuu ka kooban yahay moduleka batteriga, qeybta xakamaynta fiilada, mootada, bamka, dhuumaha iyo waalka. Mabda'a aasaasiga ah ee nidaamka bamka biyaha sawir-qaadista ayaa ah in la isticmaalo unugyada qorraxda si loogu beddelo tamarta qorraxda tamarta korantada, ka dibna loo kaxeeyo mootada si loo kaxeeyo bamka biyaha sawir-qaadista iyada oo loo marayo koontaroole. Nidaamka bamka biyaha ee loo yaqaan 'Photovoltaic pump' waxaa si ballaaran loogu isticmaali karaa biyaha dadka iyo xoolaha meelaha aan lahayn koronto, waraabka beeraha iyo meelaha lagu kala firidhsan yahay sida jasiiradaha xadka iyo dirista. Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo ay sii kordheyso darnaanta "dhibaatada cuntada" iyo "dhibaatada tamarta", waxaa si tartiib tartiib ah loogu amaanay inay tahay wax soo saarka isdhexgalka warshadaha ee ugu wax ku oolka badan si loo xalliyo dhibaatada dhul wax ku ool ah oo la beeray, loo hagaajiyo wax soo saarka laguna beddelo tamarta lafaha leh nadiif tamarta Waa qaab cusub oo dhaqaale oo loogu talagalay horumarka ballaaran ee warshadaha soo jireenka ah sida dhowrista biyaha beeraha, xakameynta lamadegaanka, isticmaalka biyaha guryaha iyo biyo-mareenka magaalooyinka. Bamka biyaha lagu dhaansado ayaa adeegsada tamarta joogtada ah ee qorraxda ka timaada. Waxay ka shaqeysaa qorrax soo bax waxayna istaagtaa qorrax dhaca. Uma baahna inay kormeeraan shaqaaluhu. Uma baahna saliida naaftada iyo koronto koronto. Waxaa loo isticmaali karaa waraabka faleebada ah, waraabka lagu rusheeyo, waraabka gudaha iyo xarumaha kale ee waraabka. Waxay keydin kartaa biyaha waxayna keydin kartaa tamarta, waxayna si weyn u yareyn kartaa kharashka ku baxa maalgashiga tamarta tamarta. Ma laha buuq, ma laha wasakhaynta deegaanka, ma isticmaasho tamarta caadiga ah, otomaatig ah, nidaam madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo. Waa tamar cusub iyo adeegsi tikniyoolajiyad cusub oo ah "mushkiladda cuntada" iyo "mushkiladda tamarta" ee xalka nidaamka dhammaystiran. Muddo dheer, waxaa jirtay abaar yar